तपाईं सपनामा मरेका मानिस त देख्नुहुन्न? थाहा पाउँनुहोस् यस्तो संकेत दिन्छ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाईं सपनामा मरेका मानिस त देख्नुहुन्न? थाहा पाउँनुहोस् यस्तो संकेत दिन्छ
तपाईं सपनामा मरेका मानिस त देख्नुहुन्न? थाहा पाउँनुहोस् यस्तो संकेत दिन्छ
जेठ २ गते, २०७६ - १५:३५
एजेन्सी । सपनामा देखापरेर मृत व्यक्तिहरूले निर्देशन वा आश्वासन दिन्छन् । पछि हुने कुनै नराम्रो घटनाका बारेमा सावधान पनि गराउँछन् । सपनामा लुकेका सन्देश बुझ्दा मान्छेले जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ ।
जेठ २ गते, २०७६ - १५:३५ मा प्रकाशित